BBC laanta Af-somaligu Af-somali xumiddii waxy ku darsadeen qoraal-xumi | Saaxil News	0
Waxaan saaka wakhiga Toronto, 10:00 subxnimo ka akhriyey Website-ka BBC qoraalkan kooban ee hoos ku qoran:
Nigel Farage: “Cadawga Midowga Yurub” ee taageeray Somaliland
Nigel Farage waa siyaasi si weyn uga muuqdo masraxa siyaasadeed ee Britain iyo Midowga Yurub.
Wuxuu waday olole ballaaran oo uu Ingiriiska kaga baxayo Midowga Yurub, waxaa uu ka mid yahay dadkii garwadeenka ka ahaa aftidii ka bixidda Britain ee Midowga Yurub. Nigel Farage waxaa uu kasoo horjeedaa siyaasadda reer Yurub, inkasta oo dhawaan loo doortay in uu xubin ka noqda baarlamaanka Midowga Yurub.
Farage wuxuu necebyahay Midowga Yurub, haddana Xisbiga cusub ee uu dhowr toddobaad ka hor sameeyay ee Brexit ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka Midowga Yurub ku matali doono Britain. Hoggaamiyihii hore ee xisbiga UKIP ayaa hadda dib ugu laabanaya magaalada Brussels si uu u sii wato ololihiisa ka dhanka ahaa midowga Yurub.
Waxaa uu howlihiisa siyaasadeed kusoo qaatay xarunta Midowga Yurub oo markii ugu horreysay loo doortay baarlamaanka sannadkii 1999-kii.
Nigel Farage ayaa horraan taageeray Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland oo uu ku ammaanay sida ay u xoojisay nabadda. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in Britain iyo dunidaba ay aqoonsdaan Jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Somaliland ayaa 18-kii bishii May ee 1991-dii, ku dhawaaqday in ay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale.
Shirar ka dhacay magaalooyinka Burco iyo Boorama oo ay ka qayb galeen wax garadka gobollada Waqooyi oo isu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada sida oday dhaqameedyada, culimada diinta, aqoonyahannada, ganacsata iyo siyaasiyiinta ayaa ku dhawaaqay go’aanka gooni isu taagga ah.
Qoraalkan yare ee kooban wuxuu inta badan ka hadlayaa siyaasiga Nigel Farage iyo siyaasaddisa Yurub iyo wadankiis Ingriska, waxayse xagga hoose ka raaciyeen laba tuduc (Two paragraph) oo midka hore yahay inuu sheegayo Nigel Farage inuu taageero siiyey kuna dhawaaqay in madaxbanaanideeda la siiyo Somaliland, wuxuu kale oo ku ammaanay sida ay u xoojisey nabadda.
Tuduca labaadna waxay ku sheegeen in Somaliland dib ula noqotay madaxbannideedi 1991-kii. Wuxuu kale oo ku darayaa in ay Somaliland shirar ku qabsadeen magaalooyinka Burco iyo Borama oo ay ka qayb galeen wax-garadka, “Gobolladda Waqooyi” oo ay ula jeedan Somaliland. Wax uu ku sii faahfaahiyey in wax-gradkaasi ay ku jireen Oday-dhaqameedku, Culimada diintu, Aqoon-yahanadda Ganacsatadda iyo Siyaasiin.
Qoraalkan waxaa ka muuqda nacayb (Hate propaganda) ummada Somaliyeed ay iskaga hore keenayaan wiilsha yar-yar ee iminka meesha ka arrimiya. Haddii aan isku dayo in aan macaneeyo eriyaga nacayb- faafinta” hate propaganda” “waa marka aad bulsho ama mujtamac aad ku weerarto af, addin, calamado, qoraalba iyo iwm, adiga oo danta aad ka leedahay tahay in aad ka abuurto qas iyo qalalaase isla markaan abuuraya colaad loo qaado dadka sida gaarka aha aad u badh-tilmaamastay.
Waxaa aan munaasib ahayn in qoraalkan oo kale lagu qoro website-ka BBC iyada oo loo muujinayo in qof cadaw ah uu taageero qadiyadda Somaliland. Waxay tani muujin xumaan oo ah: in qof cadaw u ah Yurub uu taageero Somaliland. Af-ka qaalada waxaa loo yaqaana (Character assassination).
BBC-du waa laanta af-ka Somaliga ku hadasha waxaan la gudboon in ay ku shaqayso nidaamka, anshaa iyo milgaha hay’adan BBC-du ay leedahay. Waxaan hubaaal ah in arrintan ay muddan tahay in si gaar ah loo eego ama isha loogu ahayo, waayo waa arrin leh xanaf iyo xajiin.